पर्वत Archives – Samacharpati
पर्वत, १४ जेठ । पर्वत जिल्लामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालको सरुवा चितवनमा भएको छ । पर्वतमा एक बर्ष देखि कार्यरत भए संगै प्रजिअ नेपालको सरुवा भई चितवन आउदैँ हुनुहुन्छ । नेपाललाई चितवनको सहायक सिडिओमा सरुवा गरिएको श्राेतले बताएकाे छ । पर्वत जिल्लामा नयाँ प्रजिअको रुपमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिब शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई पठाउंदै […]
पर्वत, ३० वैशाख । साहसिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै गएको पर्वतमा फेरि अर्को साहसिक खेल सञ्चालनमा आएको छ । कुश्माबजारमा कालीगण्डकी नदीमाथि बनेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीजम्प परिसरमा नेपालकै अग्लो लठ्ठेपिङ सञ्चालनमा आएको हो । दशैँ–तिहारमा बाँस गाडेर बनाइने पिङ लिङ्गेपिङजस्तै जमीनबाट १२ मिटर उचाइका फलामे स्तम्भमा पिङ बनाइएको हो । कालीगण्डकीमाथि निर्माण भएको बन्जीपुल २२८ […]
पर्वत, २६ वैशाख । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण डेढ महिनाभन्दा लामो बन्दाबन्दी जारी छ । बन्दाबन्दीका कारण अन्योलमा परेको (एसइई) माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिने १० कक्षाका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न पर्वतमा रेडियोबाट ट्युसन पढाउन शुरु गरिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले गत चैत ६ गतेदेखि शुरु हुने भनिएको विद्यालय शिक्षा परीक्षा एसइई स्थगन […]
सुवास लामिछाने , पर्बत, १२ बैशाख । पर्बतको कुश्मामा रहेको सनराईज बैक लिमिटेडले जिल्ला अस्पताल पर्बतलाई १५ थान पिपिई सहयोग गरेको छ । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा सम्वेदनशिलतालाई मध्येनजर गरि बैंकले १५ थान पिपिई उपलब्ध गराएको हो । शुक्रबार बैंकका कुश्मा शाखाका प्रवन्धक गोविन्द आचार्यले अस्पताल ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द पहाडी तथा डा. शिशिर देवकोटालाई सामान […]
पर्वत, १२ वैशाख । केही दिनअघि चट्याङ लागेर ज्यान गुमाएकी पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ शङ्करपोखरीकी कल्पना भुसालको परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गरिएको छ । पीडित परिवारको घरमै पुगेर बिहीबार जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको तर्फबाट रु एक लाख र फलेवास नगरपालिकाको तर्फबाट रु ५० हजार गरी रु एक लाख ५० हजार हस्तान्तरण गरिएको हो । फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख […]
पर्बत,११ बैशाख । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वाड नं. ८ निवासी शोभा पौडेल जिसीको पहलमा जिल्ला अस्पताल पर्वतलाई पचपन्न हजार पाँच सय पचपन्न रुपैंया सहयोग प्राप्त भएको छ । हाल अमेरिकाको जर्जिया बस्ने जिसीको पहलमा आफना साथीहरु समेतको सहयोगमा अस्पताललाई पिपिई लगायतका अति जरुरी सामान खरिदका लागि उक्त रकम सहयोग प्राप्त भएको जिल्ला अस्पताल पर्वतका ब्यवस्थापन […]
पर्वत, २ वैशाख । गए राति परेको असिनापानीका कारण पर्वत र बागलुङमा करोडौँको क्षति पुगेको छ । पर्वतको जलजला र मोदी गाउँपालिका तथा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकामा भीषण असिनापानी परेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ । यस वर्ष यो चौथोपटक ठूलो असिना परेको हो । असिनाले खेतबारीमा लगाएका मकै, भित्र्याउन तयार भएको गहुँबाली, फलफूल र […]
पर्वत, २८ चैत । लकडाउनको फाइदा उठाउँदै खाना पकाउने एलपी ग्यास बढी मूल्यमा बेचेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले एक व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ । उपभोक्ताहरुको गुनासोका आधारमा प्रहरीले जलजला गाउँपालिका–३ वारिवेनीमा व्यवसाय गरी बस्ने मीनप्रसाद रेग्मीलाई बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको हो । वारिवेनीमा सञ्चालित दिप्सन मेटल स्टोर्सका सञ्चालक रेग्मीमाथि बजार मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर ग्यास […]
पर्वत, २८ चैत । लक डाउन उल्लंघन गर्ने १४ जनालाई पर्वत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पर्वतको सदरमुकाम कुस्माबजार र आसपासको क्षेत्रबाट लक डाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा १४ जना ब्यक्ति र केही सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रण गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले दिएको जानकारी अनुसार लक डाउनको अबधीमा बिना पास सञ्चालनमा आएका ७ वटा […]
पर्वत, २६ चैत । कालिगण्डकी नदीमा हाम फालेकी एक महिलालाई पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका युवाहरुले सकुसल उद्धार गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला घर भई मजदुरी गर्ने अन्दाजी ३२ वर्षीया देवी थापा नाम गरेकी महिला पर्वतको जलजला गाउँपालिका–३ दोबिल्लाबाट कालिगण्डकी नदीमा हामफालेकी थिइन् । मङ्गलबार साँझ करिब ६ बजे पिपलबोट युवा क्लबका सल्लाहकार सन्दीप गुरुङसहितका युवाले महिलाको […]